तीन हजार वर्षअघि किन घट्यो मानव मस्तिष्कको आकार? - Nepal Sanchar
काठमाडौं, ८ कात्तिक । मस्तिष्क मानव शरीरको सबैभन्दा जटिल अंग हो। मानव मस्तिष्कको विकासबारे एक पछिल्लो अध्ययनले करिब-करिब मिल्दोजुल्दो तथ्य उजागर गरेको छ। करिब तीन हजार वर्षअघि मानव मस्तिष्कको आकार घटेको अध्ययनले देखाएको छ। मस्तिष्कको आकार किन बढ्ने वा घट्ने हुन्छ भन्ने तथ्य चित्रण गर्न कमिलालाई नमुनाका रूपमा अध्ययन गरिएको थियो। मानव समाजमा मस्तिष्क संकुचन सामूहिक बुद्धिको विस्तारसँग समानान्तर हुन्छ।
प्लेइस्टोसिन कालदेखि मानव मस्तिष्कको आकार घटे पनि यो तथ्यलाई कम महत्त्व दिइएको छ। यो परिवर्तन ठ्याक्कै कहिले भयो वा यो तथ्यबारे किन थाहा भएन त? यी सवालका उचित जबाफको प्रतीक्षा गर्नै पर्छ।
‘मानव शरीरबारे आश्चर्यजनक तथ्य के हो भने प्लेइस्टोसिनकालीन पूर्वजको तुलनामा अहिले हाम्रो मस्तिष्कको आकार सानो छ। हाम्रो मस्तिष्कको आकार किन घट्यो भन्ने कुरा मानवशास्त्रीहरूका लागि ठूलो रहस्य भएको छ’, अध्ययनपछि प्रकाशित लेखका सहलेखक डार्टमाउथ कलेजका डा. जेरेमी डिसिल्भाले व्याख्या गरे। यो रहस्य खोतल्न विभिन्न प्राज्ञिक क्षेत्रका अनुसन्धाताले मानव मस्तिष्क उद्विकासको ऐतिहासिक संरचना अध्ययन गर्ने योजनामा छन्, यसबाट आएको निष्कर्ष यसअघि भेटिएका तथ्यसँग तुलना गरी भित्री रहस्य खोतलिनेछ।
‘जैविक मानवशास्त्री तथा व्यवहार पारिस्थितिकीविद् र विकासवादी न्युरोबायोलोजिस्टले मस्तिष्कको विकासबारे आफ्ना विचार आदानप्रदान गर्न सुरु गरेका छन् र प्रकृतिमा के संभव छ भनी पहिचान गर्न मानव र कमिलामाथि गरिएका अनुसन्धानले मद्दत गर्नेछन्’, बोस्टन युनिभर्सिटीका सहलेखक डा. जेम्स ट्रानिइलोले भने।
अनुसन्धाताले ९८५ अवशेष तथा आधुनिक मानव क्रेनियामाथि परिवर्तन बिन्दु विश्लषण (चेन्ज प्वाइन्ट एनालिसिस)को प्रयोग गरेका छन्। यसबाट के पत्ता लाग्यो भने २१ लाख वर्षदेखि १५ लाख वर्षअघिसम्म प्लेइस्टोसिन अवधिमा मानव मस्तिष्कको आकार बढेको थियो। तर, तीन हजार वर्षअघि होलोसिन अवधिमा मस्तिष्कको आकार घट्यो। पछिल्लो यो निचोड यसअघिका भन्दा सान्दर्भिक छ।
मानव मस्तिष्क विकासबारे कमिलाले के सिकाउँछ ?
स्वघोषणा गरेर कात्तिकभित्र फाइबर-पोलको भाडा बुझाउन प्राधिकरणको निर्देशन
अँगालोको न्यानो पना र घामको तापको प्रभाव खोज्ने वैज्ञानिकलाई चिकित्सा विज्ञानतर्फको नोबेल पुरस्कार